Magacyadii MSN Iyo BBC Oo Halis Ku Jira Iyada Oo Ay Badali Karaan BBCM Iyo MS Iyo Neymar Iyo Mbappe Oo Sabab Unoqon Kara | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Magacyadii MSN Iyo BBC Oo Halis Ku Jira Iyada Oo Ay Badali Karaan BBCM Iyo MS Iyo Neymar Iyo Mbappe Oo Sabab Unoqon Kara
Saddexdii xili ciyaareed ee la soo dhaafay waxaa si joogto ah laysku soo barbar dhigayay lixda gool dhaliye ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona weerarka uga ciyaara ee BBC iyo MSN laakiin suurtogalnimada uu isbarbar dhigani ku sii socon karo xili ciyaareedka cusub ayuu shaki wayni ku jiraa. Saddexda gool dhaliye ee Barcelona ayaa ka soo wada jeeda qaarada Koonfur America halka saddexda gool dhaliye ee Madrid ay dalalka Yurub ka soo jeedaan.
Ugu horayn MSN ayaa la waayi karaa xarafka N ee Neymar Jr u taagan iyada oo kooxda PSG wada qorshe ay lacagtii abid ugu badnayd ugula soo wareegayso xidiga ree Brazil, waana sabab uu ku soo dhamaan karo magaca aduunka oo dhan caanka ka noqday ee MSN. Saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ayay MSN soo dhaliyeen goolashii abid ugu badnaa ee ay saddex ciyaartoy oo isku koox ahi soo dhaliyeen ee tartamada oo dhan.
Dhinaca kale Real Madrid ayaa si wayn u doonaysa saxiixa Kylian Mbappe waxayna warar soo baxay sheegayaan in Real madrid ay saxiixa 18 sano jirkan samayn doonto kaliya marka ay go’aansato in mid ka mid ah BBC uu safka kooxdeeda ka baxo.
Laakiin xataa haddii ayna Madrid iska iibin saddexda xubnood ee BBC waxaa Zidane si wayn ugu adkaan doonta in uu hal mar garoonka soo wada galin karo BBCM, waa haddii uu Mbappe kus oo biiro Madrid. Mbappe ayaan koox wayn ku biiri doonin ilaa inta looga balan qaadayo in booskiisa oo joogto ah uu helayo waana sabab ay Zidane ugu adkaan karto in uu isku sii hayo BBC iyo Mbappe.
Real Madrid ayaa doonaysa in ay lacag rekoodh aduun ah kula soo wareegto Mbappe laakiin haddii uu Neymar ku biiro PSG ayuu isna rekoodh cusub u dhigi karaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, sidaa daraadeed, imaatinka Mbappe ee Real Madrid iyo bixitaanka Neymar ee Barcelona ayaa magacyadii caanka ahaa ee MSN iyo BBC kala dhantaali kara.
Si kastaba ha ahaatee, inta uu suuqa kala iibsigu furan yahay ayay kala cadaan doontaa haddii BBC iyo MSN ay sii wadan doonaan dagaalkii kubbada cagta ee ay saddexdii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo jireen, iyada oo labada kooxoodba ay isku diyaarinayaan xili ciyaareed kale oo xiiso badan.